Saffron - Ihe kachasị oké ọnụ n'ụwa ma n'otu oge ahụ a na-agwọta
Saffron | Nri mgbe nri
Ike ike nke saffron - akụkọ ifo na akụkọ ifo
A maara Saffron dị ka eze nke ihe uto. Enweghị ihe kpatara ya, n'ihi na nke a bụ ihe kachasị oké ọnụ n'ụwa. Enwere ya site na okooko osisi "Crocus Sativus". Naanị ihe nkedo stampụ atọ nwere ike iwepụta kwa ifuru.
Saffron - Ezigbo ego na Ngwọta nke ụwa
Maka owuwe ihe ubi nke otu kilo nke saffron, dịka osisi 200.000 dị mkpa.
Ego kachasị oké ọnụ n'ụwa - nwetara site na Crocus sativus
Ebe ọ bụ na enweghị ike iwepụta ihe na igwe, a na-akpọ ọkwa akwụkwọ ntuziaka dị egwu. Nke a bụkwa ihe kpatara uru a bara.
Ekwuworị Saffron na akụkọ ifo Gris. Akụkọ banyere ya na Zeus dina n'elu ihe ndina nke akụ a. Ọtụtụ akụkọ ntụrụndụ na-agbagharị gburugburu eze nke ihe uto, ma a na-ama ha ma na-enwe ekele maka ngwọta ha.
Ugbo ohia na nkesa nke saffron
A kwenyere na ihe si na Crete oge ochie gbasaa n'ụwa niile. Enweghị amaokwu dị nchedo gbasara obodo si. Ebe ọ bụ na osisi ndị siri ike hụrụ ọnọdụ ihu igwe pụrụ iche, saffron enweghị ike itolite n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Taa, ebe kachasị mkpa na Iran. India na Gris bụ ndị ọzọ isi saffron na-emepụta ebe. Ruo n'ókè dị ala karị, a na-akọ ihe dị na Morocco na Spain. Ọnụ ọgụgụ dị ebe a dị ntakịrị na ihe 1,3 tọn kwa afọ. Central Europe nwekwara ike ịnya ebe ya na-eto eto. Dị ka ihe atụ, a na-akọcha saffron na saffron pannonian n'Austria. Ihe kacha amasị bụ obodo nta nke Mund na Switzerland. Ebe a, a dị oké ọnụ ahịa ose na-eto na mpaghara nke banyere 2.500 square mita. Mgbe owuwe ihe ubi ahụ na-ahụ anya, obodo ahụ dum na-abata ọnụ.
A na-ekwu na osisi a bụ ike ike, ọ nọ na Gris oge ochie dị ka ikike egosiri ike. N'oge ochie, e kwuru na e debere saffron nanị maka chi na eze. Ha na-eyiri uwe ndị e ji ákwà saffron dyed.
A na-ewere ihe na-esi ísì ụtọ dị ka ihe kachasị mkpa, na-emegharị ma na-eme ka akwara dị ike. A na-eji agbaji stampụ mee ihe na nkà mmụta sayensị Chinese (TCM), kamakwa n'ime anụ ụlọ. Na mgbakwunye, a na-ewere saffron dịka ọrụ ebube. A na-esi ísì utọ na-esi ísì ụtọ na ihe ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ.
A na-eji osisi ahụ eme ihe dị ka ihe dị ụtọ maka uto ya dị ụtọ. Eji nwayọ mee ihe, ọ na-enye nri nri pụrụ iche na agba ọbara ọbara.
Ngwongwo - Mkpuru osisi mgbe esi nri
Grill spices - Mgbe grilling nri ngwa nri
Mmiri oyi oyi mgbe isi nri
Turmeric | Nri nri
City Country River Solutions Ngwaọrụ
Mepụta ubi ahihia | Ogige ngwa nri
Ọnwụ mgbe ọ na-efu arọ | eri
Nri - ịṅụ mmanya dị mkpa mgbe ọ na-efu
Nlekọta nna - ọrụ ebube na nwa
Ezi ntụ ọka - na-edozi ya na Anụ Mmịkpọ
Kwadebe risotto n'ụzọ ziri ezi | Nri nri
Akụkọ banyere mmiri | Nri nri